परदेशभन्दा घरदेशमै सिप सिकी केही गर्नु उत्तम |
परदेशभन्दा घरदेशमै सिप सिकी केही गर्नु उत्तम
18 July, 2016 | Anjana Bhandari | 1755 Views | comments
नेपाल भूपरीबेष्ठित राष्ट्र हो । दुई ठुला ठुला देशको बीचमा भएर होला यसलाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुल पनि भनिन्छ । नेपाल धार्मिक, सांस्कृतिक रितिरिवाज र प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण छ । उत्तरमा चाँदी झै टल्किने हिमालले देशको रौनकतालाई अझै बढाएको छ ।
अनि तराईमा भएको विशाल फाँट र घनाजंगल देख्दा यस्तो लाग्छ नेपालले आफ्नो कम्मरमा हरियो पटुकी सपक्क कसेर उभिएको छ । यहाँ तराइमा गर्मी हुँदा हिमालले शितलता प्रदान गर्दछ । अनि पहाडको जाडो बढ्दा तराइले सेक्ने गर्दछ ।
नेपाल जलस्रोतमा दोस्रो धनी देशमा हो । संसारको अग्लो सगरमाथा नेपालमा नै रहेको छ । शान्तिका अग्रदुत गौतबुद्ध, सहनशिलताकि प्रतीक सिता जन्मेको देश हो यो ।टुक्रा टुक्रा भएर बाइसे चौबिसे राज्यमा फैलिएर रहेको नेपाललाई राजा पृथ्वी नारायण शाहले एकीकरण गरेर एउटा सिङ्गो नेपालको रुपमा खडा गरेर चार जात छत्तिीस वर्णको सुन्दर फुलबारी घोषित गरेका थिए ।
अहिले खै कस्को नजर लाग्यो ? आज नेपाल नेपाल नै नरहला कि भन्ने डर हुन थालिसक्यो । जता पनि कुर्चीको खेल भइरहेको छ । देश विकास गर्न छोडेर नेताहरु एक आपसमा लड्नमा व्यस्त छन् । गर्नेहरुलाई पनि गर्न नदिने प्रवृतिले गर्दा देश विकासका कार्यहरु द्रुत गतीमा अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।
योग्यता अनुसारका रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम दिनको दुई गुना रातको चौगुना भएर बढ्दै छ । वर्षेनी लाखौ युवाहरु विदेशिन बाध्य छन् । युवाहरु भनेका जुनसुकै देशको लागि पनि देशको भार उठाउने सामथ्र्य राख्ने काँध हुन् । तर नेपालमा त देशको भार सम्हाल्ने युवाहरु बाहिरिनाले देश भित्रभित्र खोक्रो बन्दै गइरहेको छ ।
नेपालका गाउँहरु रित्ता रित्ता हुन थालिसकेका छन् । मीठा सपना बोकेर विदेश जाने कति युवाहरु आफ्ना सपना पुरा गर्न नपाउँदै आफ्ना सपनाहरुलाई झोलामा नअटाइ खुद आफै एउटा काठको बाकसमा फर्कन्छन् ।
पछिल्लो समय विदेशिने नेपाली युवतीहरु संख्या पनि बढ्दो छ । कोही डिपेन्डेन्ट भिसामा जान्छन् त कोही आफै । यसरी जानेहरुमा गाउँ र शहरका युवतीहरुको संख्या बराबर छ । विवाहित महिलाको संख्या पनि त्यति नै छ । नेपाल पछिल्लो समयमा सबभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्राउने देशहरुमा तेस्रो स्थानमा स्थापित भइसकेको छ । यसरी युवायुवतीहरु बाहिर जाँदा विकृति पनि भित्रिएको कुरालाई हामी नकार्न सक्दैनौ ।
भनिन्छ महिलाहरु भनेका घरको गहना हुन् । जुन घरमा असल गुण, असल आचरण भएकी महिला हुन्छिन् त्यो घरका सबै सदस्यहरुको आचरण पनि राम्रो हुन्छ । अझ महिला यानकी आमा नै बच्चाबच्चीहरुको पहिलो गुरु हु्न् । यदि बालबच्चाको पहिलो गुरु नै घर छोडेर विदेशतिर लाग्ने हो भने त्यो घरको हालत के होला अनि ती बालबच्चाको हालत के होला ?
यसरी घरका अभिभावकहरु विदेशिनाले समाजमा विकृतीहरु बढिरहेका छन् । अभिभावकको अभाभवमा केटाकेटीहरु लागुपदार्थको दुव्र्यसनतिर गएको हामी देख्न पाउछौ । कति केटाकेटीहरु आफ्नो पढाइलाई बीचैमा छोडेर बरालिदै हिडेको पनि प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ । यो सबै हुनुमा केटाकेटीहरुको केही दोष छैन ।
बच्चाबचीहरु भनेका काँचो माटो जस्तै हुन् । उनीहरु त जस्तो वातावरणमा हुर्कियो त्यस्तै बन्छन् । अभिभावकको अभावमा उनीहरु आफ्नो जिन्दगीलाई गलत बाटोतिर धकेलिरहेका हुन्छन् ।
हुन त अभिभावकलाई पनि दोष दिन मिल्दैन । कुन आमाबाबालाई मन हुन्छ होला र आफ्ना साना साना बालबच्चालाई छोडेर अर्काको देशमा आफ्नो स्वाभिमान बेच्न जाने ? यदि सरकारले युवाहरुलाई योग्यताअनुसारको रोजगारीको अवसर र सिपमुलक तालिमहरु प्रदान गर्ने हो भने युवाहरु विदेशिने क्रम केही हदसम्म कम हुन्छ कि ?
हामी समाजमा नै कति उदाहरण देख्न सक्छौ जो विदेश नगएर स्वदेश मै बसी विभिन्न सिपमुलक काम गरी लाखौ कमाएका छन् । अर्कोतिर महिलाहरु विदेशिदा संस्कृति र चालचलनमा पनि विचलन आउँछ ।
विदेश जानेहरुको अर्को समस्या यौन पनि रहेको छ । महिला होस् या पुरुष दुवैमा यौनइच्छा हुनु सामान्य कुरा नै हो तर त्यो इच्छा कुन हदसम्म हुन्छ त्यसमा भर पर्छ । यदि पति–पत्नीबीच वा एउटै यौनसाथीसँग हुन्छ भने ठीक छ तर जोसँग पनि यौन इच्छा पूर्ति गर्दै हिडदा यौन स्वास्थ्य र चारित्रिक दृष्टीकोणले पनि राम्रो होइन ।
म यौनको कुरा यसले उठाइरहेकी छु कि जव एउटा पत्नी विदेशिन्छे वा पति विदेशिन्छ उनीहरु आफूमा भएको यौनइच्छालाई पुरा गर्न यौनसाथीको खोजीमा लाग्छन् । जस्ले गर्दा विभिन्न घटनाहरु घटरहेका हुन्छन् । जस्तै– बलात्कार, हत्या, आत्महत्या, सम्बन्ध विच्छेद आदि ।
अनि पति विदेशमा अनि पत्नी पतिको वर्षौ वर्ष लगाएर अरुको देशमा स्वाभिमान बेचेर कमाएको सम्पति लिइ अरुसँगै फरार भएको पनि सुन्न पाइन्छ। म महिला विदेश जानु हुँदैन भन्दिन तर विदेश जानुको सट्टा आफ्नै देशमा लगानी गरेर सिपमुलक कामतर्फ लाग्ने हो भने नाम, दाम सबै कुरा यही कमाउन सकिन्छ । आफ्नो घरदेशमा पाइने माया, स्नेह, इज्जत, परदेशमा कहिल्यै पनि पाइदैन ।
महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले आफ्नो खण्डकाव्य मुनामदनमा पनि लेखेका छन्:-
हुन त जिन्दगीमा पैसा नै सब थोक हो भन्नेहरुले भन्लान् । धेरै धन भएपछि गाडी किनिन्छ बङ्गलो किनिन्छ, घडेरी जोडिन्छ आदि इत्यादी । तर धनको लोभमा धनकै पोखरीमा चुर्लुम्म डुब्नेहरुलाई के थाहा एउटा बच्चाको लागि एउटा आमाको न्यानो काख किन्न सकिदैन भनेर ।
एउटा लेखकको नाताले विदेशमा पैसाको बोट नै छ कि जस्तो गरी विदेश जाने युवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई विदेशमा जाने पैसाले स्वदेशमा नै आम्दानीमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी आफ्नो स्वाभिमानी भई बाँच्न अनुरोध गर्दछु।
युवाहरुको विदेशिने क्रमलाई न्युन गर्नको लागि सरकारले पनि योग्यता अनुसारको रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु जरुरी छ । सस्तो व्याजमा ऋणहरु उपलब्ध गराउने, सिपमुलक तालिमहरु प्रदान गर्ने, युवा जगरण लगायत उत्पे्ररणा प्रदान गर्नको लागि विभिन्न कक्षाहरु सन्चालन गर्ने कुरामा निकायको ध्यान जानुपर्छ ।